खोप लगाएका व्यक्तिलाई किन लाग्छ कोरोनाभाइरस ? - Dainik Online Dainik Online
खोप लगाएका व्यक्तिलाई किन लाग्छ कोरोनाभाइरस ?
प्रकाशित मिति : २८ पुस २०७८, बुधबार ७ : ४५
बीबीसी । विश्वमा कोभिड–१९ महामारीको नयाँ लहर देखा परिरहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, संयुक्त अधिराज्य, अर्जेन्टिना, ब्राजिल र कैयौँ अरू देशहरूले डेल्टा र ओम्रिकोन भेरिअन्टहरूको मिश्रणका कारण कीर्तिमानी सङ्ख्यामा सङ्क्रमणहरू बेहोरिरहेका छन्।
यहाँ हामी खोपले महामारी नियन्त्रण कति सहज बनाइरहेका छन् भनेर विश्लेषण गर्दैछौँः
त्यही भएर खोप लगाउनुको मुख्य उद्देश्य सङ्क्रमण नै रोक्नु भन्दा कोरोनाभाइरसको आक्रमण शरीरका लागि कम घातक बनाउनु हो। यही तर्क दशकौँदेखि उपलब्ध भएको फ्लू खोपका हकमा लागु हुन्छ।
अहिलेको अवस्थालाई केले व्याख्या गर्छ ?
अहिलेको अवस्थामा खोप लगाइसकेका व्यक्तिमा कोरोनाभाइरस पुनः सङ्क्रमण वा पोजिटिभ देखापर्ने क्रम वृद्धि भइरहेकोमा दुईमत छैन र यसको पछाडि तीनवटा कारण छन्।
पहिलो कारण सामान्य छ। मानिसहरू परम्परागत रूपमा नै नयाँ वर्ष र क्रिसमस मनाउन एक ठाउँमा भेला हुन्छन्। दोस्रो, विश्वका कतिपय क्षेत्रमा खोप उपलब्ध भएको एक वर्षपछि विज्ञहरूले खोपबाट कोभिड विरुद्ध प्राप्त हुने प्रतिरक्षा सधैँ कायम नरहने तथ्य सिकेका छन्।
केफोरीका अनुसार खोपको प्रकार र प्रत्येक व्यक्तिको उमेरले प्रतिरक्षा प्रणाली कति कमजोर बन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ। यसले ज्येष्ठ नागरिक वा प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भएका र त्यसपछि सम्पूर्ण वयस्क जनसङ्ख्यालाई तेस्रो मात्रा खोप दिनुपर्ने आवश्यकतालाई अझ उजागर गरिदिएको उनको भनाइ छ।
तेस्रो कारण चाहिँ ओमिक्रोन भेरिअन्ट देखा पर्नुलाई मानिएको छ। यो खोपका वा पहिले नै देखा परेको कोभिडका कारण कायम भएको प्रतिरक्षा प्रणाली विरुद्ध पनि आक्रामक रहेको छ। “यसलाई हेर्दा खोप लगाएका व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण देखिनुलाई एकदमै सामान्य रूपमा लिइनुपर्छ र हामीले यो अवस्थासँग बाँच्न सिक्नुपर्छ,” केफोरीले भने।
अमेरिकाभरको तहमा पनि खोपको प्रभावकारिता त्यस्तै पाइएको सेन्टर्स फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनले जनाएको छ। संयुक्त अधिराज्यको स्वास्थ्य तथा सुरक्षा निकाय पनि एउटा प्रतिवेदनमा यस्तै निष्कर्षमा पुगेको थियो।
उक्त सरकारी निकायले गरेको अध्ययनले तीन मात्रा खोप दिँदा ८८ प्रतिशत प्रभावकारी हुने पाइएको उल्लेख गरिएको भए पनि त्यो सुरक्षा कहिले सम्म प्राप्त हुन्छ भनेर खुलाइएको छैन। केफउरीले यी प्रमाणले ओमिक्रोन भेरिअन्ट र बढिरहेका सङ्क्रमणका घटनाका सन्दर्भमा खोपको महत्त्व अझ पुष्टि गरेको डाक्टर केफोरी बताउँछन्।